ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး တစ်ကျော့ပြန် ထွန်းကားလာသောနိုင်ငံ ( ရုပ်သံ ) – ရှအေလငျး
နှစ်(၇၀၀) နီးပါးမျှ ဗုဒ္ဓဘာသာနာကြီး ကွယ်ပျောက်မလို ဖြစ်နေတဲ့သာသနာ
အစပျိူးခဲ့သည့် မဇ္ဈိမဒေသ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး တစ်ကျော့ပြန် ထွန်းကာ လာပြန်ပြီ 🙏🙏🙏
အခုအိန္ဒိယမှာ တစ်နေ့တစ်ခြား ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေး တိုးပွားလာပြီး ဘုန်းကြီး ကျောင်းနှင့်စေတီများ အသစ်ဆောက်လုပ်ရဟန်းသံဃာကို နေ့စဉ် အလှူ အဒါန်းများပြု လုပ်ကြတယ်။
The Buddhist way of life is back on track in its homeland after 700 years of disappearance.
Grand Openning Ceremony ofanew Buddhist temple in India.
နှဈ(၇၀၀) နီးပါးမြှ ဗုဒ်ဓဘာသာနာကွီး ကှယျပြောကျမလို ဖွဈနတေဲ့သာသနာ
အစပြိူးခဲ့သညျ့ မဇ်ဈိမဒသေ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ဗုဒ်ဓသာသနာတျောကွီး တဈကြော့ပွနျ ထှနျးကာ လာပွနျပွီ 🙏🙏🙏
အခုအိန်ဒိယမှာ တဈနတေ့ဈခွား ဗုဒ်ဓဘာသာလူဦးရေး တိုးပှားလာပွီး ဘုနျးကွီး ကြောငျးနှငျ့စတေီမြား အသဈဆောကျလုပျရဟနျးသံဃာကို နစေ့ဉျ အလှူ အဒါနျးမြားပွု လုပျကွတယျ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲစတင်ကျင်းပ….. ဖြေနိုင်ကြပါစေ..ဆုတောင်းပေးကြဦးနော်
နောက်ကျောတက် ..ဇက်ကြောတက် ..လက်ပြင်ငုတ်.. အုံးလွဲနေသူများ အတွက်
မွန်ပြည်နယ် ရေဘေး ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ကျပ် သိန်းတစ်ထောင် ကျော် စေတနာ့ အလှူရှင်ကြီး...
မြွေဟောက်ကို အရှင်လတ်လတ်သတ်ပြီးချက်ပေးတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား၊ဂျကာတာက...